လုပ်ခဲ့ပြီး Reality ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ apps များ apk အပေါ်ရရှိနိုင် Apps ကပဟာ android apk
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » လုပ်ခဲ့ပြီး Reality
Category: - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality
လုပ်ခဲ့ပြီး Reality အားကစားပြိုင်ပွဲ
AR သို့မဟုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Reality ဂိမ်းဟာဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာအဖြစ်ကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာကစားသမားများ၏အမှန်တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအသံနှင့်ဂိမ်းပုံရိပ်ယောင်များပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ VR ဂိမ်းသို့မဟုတ် Virtual Reality ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်တိကျသောပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းရန်တစ်ချုပ်ထားဧရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခန်းတစ်ခန်းကိုအသုံးပြုဖို့သောအခါ, လုပ်ခဲ့ပြီး Reality ဂိမ်းများကိုလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်သုံးပါနဲ့သူ့ဟာသူတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာကစားလယ်ပြင်ဖန်တီးပါ။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုသည့်အတိုင်း VR ဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ VR နားကြပ်လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင် AR ဂိမ်းအများစုသူတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကအလွယ်တကူခရီးဆောင်ဂိမ်းစနစ်များ, တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများအပေါ်ကစားနေကြသည်။
အဆိုပါလုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂိမ်းအခြေခံအားဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏အမှန်တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်အထက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီဂိမ်းပဲစားပွဲပေါ်ကို virtual Checker နဲ့တူကစားရန်အခြေခံအားဖြင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုတခုအပေါ်မှာစွဲငြိဖွယ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးသော Apps ကပ APK ကိုမှာမရရှိနိုင်အများအပြားအဆင့်မြင့် AR ဂိမ်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂိမ်း In-ဂိမ်းကို virtual တံတားများပေါ်တွင်စစ်မှန်သော-world objects များကိုန်းကျင်ကိုတက်ကြောင်းဇာတ်ကောင်ရှိနိုင်ပါသည်။
သူတို့အဆက်မပြတ်စေ့စပ်ကစားသမားကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်သစ်တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရန်ရှိသည်အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင် Creating တကယ် developer များအဘို့အချိန်အများကြီးကြာပါသည်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, AR ဂိမ်းကစားခြင်းကိုအလိုအလျောက်လယ်ပြင်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဘဝပတ်ဝန်းကျင်၏မတူကွဲပြားမှုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်း, ဂိမ်း ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအစစ်အမှန်ထိတွေ့နှင့်အတူဖြစ်လာသည်။
ဒါကြောင့်ဂိမ်းကစား AR မှကြွလာသည့်အခါသူက AR ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်တော်လှန်ရေးဆောင်ခဲ့သောပထမဦးဆုံးဂိမ်းဖြစ်သကဲ့သို့, Pokemon Go ကိုကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။ ဒါဟာတည်နေရာ-based AR ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့ gyroscope, ကင်မရာ, GPS နဲ့နာရီကိုအသုံးပြုသည်။ သငျသညျမြက်တစ်ရှဲရှဲနှင့်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်၏မြေပုံကိုမြင်လိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၏ထိပုတ်ပါနဲ့ Pokemon ကိုဖမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာ AR mode မှာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Pokemon ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုတ်ကောင်လက်နက်ကိုင် Revenant AR
WallaMe - လုပ်ခဲ့ပြီး ...